गुल्मीको चन्द्रकोटमा गठबन्दनका युवराज केसी विजयी - Gulminews
गुल्मीको चन्द्रकोटमा गठबन्दनका युवराज केसी विजयी
२०७९ जेष्ठ १, २२:०३
गुल्मी, जेठ ०१ । गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा गठबन्दनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका युबराज के.सीले जित हासिल गरेका छन् । के.सीले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका चेतन बस्नेतलाई हराउँदै जित पक्का गरेका हुन् ।
माओबादी नेता युबराज के.सी ५ हजार ७०० मतका साथ विजयी भएका हुन् । अध्यक्षमा पराजित नेकपा एमालेका चेतन बस्नेतले ३ हजार २४७ मत प्राप्त्र गरेका थिए ।
त्यस्तै उपाध्यक्षमा पदमा पनि गठबन्दनकै उम्मेदवारले जित निकालेका छन् । गठबन्दनका तर्फबाट उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका बिष्णु प्रसाद भण्डारीले ५ हजार १६ मत ल्याउँदै आफ्न प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी राधिका अर्याललाई पराअजित गरेका हुन् । अर्यालले ३ हजार ८१६ मत प्राप्त गरेकी छन् ।
कुन वडामा कस्ले जिते ?
गाउँपालिकाका ८ वटा वडा मध्य ५ वटामा गठबन्दनका उम्मेदवारहरुले जितेका छन् भने २ वटामा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरुले जितेका छन् । १ वडामामा भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित निकालेका छन् ।
वार्ड नं १ मा दिब्रुङ: घनश्याम खरेल, माओवादी केन्द्र
वार्ड नं २ बिशुखर्क: कमल के.सी, स्वतन्त्र
वार्ड नं ३ हर्राचौर: डिल्लिराज सुबेदी, नेपाली कांग्रेस
वार्ड नं ४ शान्तिपुर: बल ब. बस्नेत, नेपाली कांग्रेस
वार्ड नं ५ ग्वाघा: पृथ बहादुर कार्की, नेपाली कांग्रेस
वार्ड नं ६ हरेवा: अमर सिंह दगामी, नेकपा एमाले
वार्ड नं ७ रुपाकोट: अनन्तराम भण्डारी, नेकपा एमाले
वार्ड नं ८ तुराङ: फणिन्द्र राज अर्याल, नेपाली कांग्रेस
अघिल्लो २०७४ सालको संबिधान सभाको निर्वाचनमा ठुला दलहरु एक्लाएक्लैजा चुनावी मैदानमा जाँदा माओवादी केन्द्रका युबराज के.सी पराजित भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमालेका मिमलाल श्रेष्ठ र माओवादी केन्द्रका के.सीलाई हराउँदै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार द्रोण खत्रीले अध्यक्ष पदमा जित निकालेका थिए ।
उता उपाध्यक्ष पदमा भने नेकपा एमालेले जितेको थियो । नेकपा एमालेकी उम्मेदवार राधिका आर्यालले नेपाली कांग्रेसकी भगवती अर्याल र माओबादी केन्द्रकी मिना बोहोरालाई पराजित गरेकी थिईन् ।